फरक (कथा) | Yopoho Directory
हरि आज निकै खुसी छ । आजको दिन ऊ आफ्नो खुसीले बिताउनेछ, छोराछोरी श्रीमतीलाई घुमाउन लानेछ, कुनै राम्रो होटलमा खाना खुवाउनेछ । यस्तै योजनाहरु बनाउदै ऊ मारुती भने कुदाउदै घर तिर जादै छ । ऊ खोला छेउको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्थ्यो । उसले साहुको भेन कुदाएको वर्षौ भइसकेको थियो । तर आज भेन कुदाउदा उसलाई अर्कै खुसी महसुस भइरहेका थियो । आज साहुले उसलाई भेनमा छोराछोरी, श्रीमतीलाई घुमाउन अनुमति दिएका थिए । आजको दिन ऊ भेन जता चाहयो लिएर जान सक्थ्यो । सधैँ कति मान्छेलाई बोकेर कहाँ कहाँ पुग्यो ऊ तर आफ्ना छोराछोरी श्रीमतीलाई भने कामको व्यस्तताले गर्दा कहिल्यै घुमाउन पाएको थिएन उसले ।
उसको साहु निकै दयालु थिए । त्यही भएर त उसलाई आज भेन लैजाने अनुमति दिए । आज उसले बिहेको सुुट लगाएको छ र उसलाई गीत गुन्गुनाउन मन लागी रहेको छ । उसले घडी हे¥यो बिहानको एघार बजीसकेको थियो । यति खेर सम्म त सबै जना तयार भई सके होलान्, उसले सोच्यो ।
५ मिनेट मै उ घरको आगनमा पुग्यो । वरिपरिका केटाकेटीहरुले गाडी घेरेर हेर्न थाले । अरु छरछिमेक पनि उत्सुक भई हेरी रहेका थिए ।आज उसले पहिलो पटक भेन घरमा ल्याएको थियो । गाडीको आवाज सुन्नासाथ हरिका छोराछोरी बाहिर आए । हरिको छोरा बिक्रमले स्कूलको ड्रेस र टाई लगाएको थियो र जुता हातमा बोकेर हिडीरहेको थियो भने छोरीले गाढा रंगको रातो फ्रक लगाएकी थिई र कपाल जिग्रिङ्ग परेको थियो ।
उनीहरु राम्रो सँग तयार भइसकेकै थिएनन् । बिक्रमले भेन छेउमा गई, अरु केटाकेटीलाई धपाउदै भन्यो ‘तिमीहरु अलि पर बस, यो हाम्रो भेन हो बुझ्यौ ।’ हरिलाई चाहिँ आफ्नो नानीहरुले लगाएको लुगा देखेर रिस उठेर आयो । ऊ जंगिदै घर भित्र छि¥यो । घर भित्र उसकी श्रीमती जानुका बाथरुममा नुहाइ रहेकी थिई । उसलाई झनै रिस उठ्यो । उसले सोचेको थियो सबै जना तयार भएर उसको बाटो हेरिरहेका होलान् । तर यहाँ त त्यस्तो केही पनि थिएन । हरिले जानुकालाई कराउदै भन्यो ‘किन यति खेर सम्म पनि तयार नभई कन बसेको ?’ जानुकाले बाथरुमबाटै भनी ‘बिहान भरि पानी नै आएन । अबेला आयो त्यही भएर ढिलो भयो ।’ हरिले केही भन्न सकेन । त्यतिकैमा जानुका बाहिर निस्की र लुगा लगाउन थाली । उसले एउटा पुरानो सारी लगाउन थालेको देखी हरिले कराउदै भन्यो, ‘के लगाएकी त्यो अलि राम्रो लुगा लगाऊ न ।’ जानुकाले भनी, ‘खै कुन चैँ लगाउनु देखाई दिनु न त ।’ हरिले हे¥यो त्यो भन्दा राम्रो अरु कुनै थिएन । उसलाई दिक्क लागेर आयो । उ फुत्त बाहिर निस्कियो र घरको आँगनमा आई गोजीमा हात हालेर यसरी उभियो मानौं त्यो घर सँग उसको कुनै नाता छैन । त्यतिकैमा बिक्रम ऊ नजिकै आयो र भन्न थाल्यो, बुबा म भेन भित्र बस्छु नि । छोरी रबिना पनि बुबा म पनि बस्छु भन्दै आई उसले पनि छरछिमेकका अगाडि सानले भेनको ढोका खोल्यो र पछिल्लो सिटमा बसाई दियो र जानुकालाई कराउन थाल्यो । केटाकेटीको चकचक गाडी भित्र सुरु भई हाल्यो ।
उनीहरु गाडीमा भएको सामान खोलखाल गरी चकचक गर्न थाले । त्यो देखेर हरिको मुड बिग्रियो । एक त ढिलो भइरहेको, त्यस माथि नानीहरुले चकचक गरेर भेनलाई क्षति पो गर्ने हुन् कि ? साहुको गाडी बिग्रियो भने ? भन्ने सोच आउना साथ उसले गाडी खोलेर छोरालाई एक झापड हान्यो । त्यसपछि त बिक्रम चिच्याउदै रुन थाल्यो । छोरा रोएको सुनेर जानुका हतार हतार गर्दै बाहिर निस्की, के भयो किन कुट्नु भएको ? उसले आतिदै सोधी । हरिले सर्सती जानुकालाई हे¥यो लिछिप्रै कपालमा तेल, रातो लत्पताएर लाएको लिपिस्टिक, जानुका पुरै पाखे जस्तै देखिएकी थिई । उसलाई निकै रिस उठीरहेको थियो तर छरछिमेकको वरिपरि केही भन्न सकेन । त्यही भएर गाडी स्टार्ट ग¥यो र छोराछोरी श्रीमती बोकेर चुपचाप हिंड्यो । केही बेर अघि सम्म ऊ कति खुसी थियो । तर अहिले उसलाई एकदम खल्लो लागिरहेको थियो । उसले सोचेका थियो आज ऊ साहुको जस्तै अनुभव गर्नेछ, छोराछोरी, श्रीमतीलाई पनि धनीमनीको जस्तै अनुभव दिलाउनेछ तर यहाँ त सबै कुरामा फरक प¥यो । आज उसलाई आफ्नो छोराछोरी, श्रीमती लिएर हिड्न लाज लागेर आयो । साहुका छोराछोरी कति अनुशासित, सफा लुगा लगाएर गाडीमा चुप लागेर बस्थे ।साहुकी श्रीमती पनि चिटिक्क सजिएर जान्थी । उसले आफ्ना नानीहरुलाई हे¥यो, जो बुबाको रिसको डरले चुपचाप थिए । जानुकाको पनि मुख अँध्यारो थियो । हरिलाई माया लागेर आयो । हिजो सम्म ऊ आफ्नो पहिलो संसार मै खुसी थयो । हिजो सम्म उसलाई आफ्नी श्रीमती र छोराछोरी औधी प्यारो लाग्थ्यो तर आज उसलाई के भयो कुन्नि, तिनीहरुलाई देख्दा बिना सित्तीमा रिसाई रहेको छ । उसले आफ्नो मन बुझायो र क्यासेट बजायो । त्यसपछि अब बुवाको रिस मर्यो भन्ठानी नानीहरु समान्य अवस्थामा आए र फेरि चकचक गर्न थाले ।
एकछिन पछि उनीहरु पार्कमा पुगे ।उसले पहिला खाजा खाने विचार ग¥यो र एउटा साधारण होटल अगाडी गाडी रोक्यो । त्यसपछि सबै जना होटल भित्र छिरे । उसले चाउमिन र कोक अर्डर दियो । नानीहरु फुरुङ्ग भइरहेका थिए । नानीहरुको खुसी देखेर उसलाई पनि खुसी महसुस भयो । उसले हँसिलो अनुहार लगायो । ऊ हाँसेको देखेर जानुकाको मुख पनि हँसिलो भयो । अब भने ऊ आफ्नै पुरानो ढाँचामा फर्किसकेको थियो । अघि सम्म ऊ आफ्नो परिवारलाई अरुको नजरबाट हेरिरहेको थियो, जहाँबाट उ उनीहरुलाई पाखे, असभ्य देखिरहेको थियो । तर अहिले उ आफ्नो परिवारलाई मायालु नजरले हेरिरहेको छ र अब सबै कुरा ठिक छ । उसले मजा सँग श्रीमती छोराछोरी घुमायो र घर फक्र्यो ।
Previous: ग्यास बचत गर्ने सजिलो तरिका (किचन टिप्स)
Next: चालु आर्थिक वर्षको अर्धवाषिर्क अवधिमा करिब १८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च